Kodzero yekunyora mumutauro wako | Zvazvino Zvinyorwa
Kodzero yekunyora mumutauro wako
Vhiki rapfuura rakawira mumaoko angu Dzorera pfungwa, chinyorwa chinounza pamwechete hurukuro ina naNgũgĩ wa Thiong'o, Anofunga weKenya uye anokwanisa kukwikwidza weNobel Prize yegore rino muLiterature. Bhuku rinoongorora matambudziko etsika uye, kunyanya, ezvinyorwa zveimwe nyika kubva pamidzi yazvo: iyo yekolonialism iyo munhoroondo yese yanga iri mukutarisira kupedza mutauro wevashoma madzinza.
Nyika, UN nemasangano vanotaura nezvekodzero dzevanhu, asi pamwe hatifunge nezvazvo kodzero yekunyora zvakare nemutauro wega.
Ngũgĩ wa Thiong'o, panguva yeimwe yehurukuro dzake uye mudziviriri mukuru wekodzero yekunyora mumutauro wake.
Panguva yainzi Congress of African Writers of English Expression yakaitirwa kuMakerere University (Uganda) muna 1962, pakave nemusangano pakati pevanyori vakasiyana vemuAfrica. Nekudaro, vazhinji vakapotsa muTanzania Shabaan Robert, mudetembi anonyanya kukosha mu Africa panguva iyoyo. Uye nei usina kuenda? Nekuti Robert haana kunyora muChirungu, asi muchiSwahili chete, uye nekudaro aive asina kukodzera kutora chikamu mumusangano wakadai.
Ichi chiitiko chakaongororwa kanoverengeka panguva yemisangano yaNgũgĩ wa Thiong'o, uyo mushure mekuburitsa zvinyorwa zvinoverengeka muChirungu nekuda kwetarenda rakamutendera kuti asimukire mumashure mekolonial social chain yeKenya, akafunga kumira nekunyora chete muna amai vake. rurimi, iyo gikuyu. Kushinga uko kwakapotsa kwamutorera hupenyu hwake uye kwakamutungamira kuenda kuutapwa kuUnited States nguva pfupi yapfuura.
Miviri yeiyo yakawanda mienzaniso yemabatiro anoita ruzhinji, mune ino nyaya yeEngland kana yeFrance imperialism iyo yaitonga Asia, Africa neLatin America kwemakore, yakatsika tsika dzakasiyana siyana. Kutanga, kuvakurudzira nezve kusakosha kwematambiro avo, mazwi, uye nhetembo; ipapo ndichivamanikidza kutendeudza misoro yavo kutsika nyowani iyo yavaisazombogona kusanganisa zvizere. Zvichakadaro, cocoa, mafuta kana madhaimani zvaiuya zvichibuda pamusuwo wekumashure.
Chinja kana kuramba
Nekudaro, panguva imwecheteyo, gakava rakajeka rinoitika mune maonero mazhinji: vamwe, vakaita seNigerian Achebe wekuNigeria, vakatora mukana wekongiresi yambotaurwa iyi kuona kuti dai akapihwa nzvimbo yekushandisa mutauro weChirungu kusvika masasi, ndaizoishandisa. Nekudaro, vamwe vanyori vazhinji vanoramba vachidavira kuti chinhu chakakosha zvirimo, uye sekureba sekupararira kukuru mumutauro weruzhinji zvichave zvakakwana, nekuti munyori haafarire mazwi, asi zvavanotaura. Kune kumwe kunyanyisa, ambotaurwa Thiong'o anonyaradza rurimi rwake rweChirungu senzira yekudzora kutonga kune dzimwe nyika mutsika diki sedzake. Marudzi ane mutauro une mimhanzi yawo, mutinhimira uye zvirevo zvakaoma kududzira mune mumwe mutauro.
Mazuva mashoma apfuura ndanga ndichitaura nezvazvo lkune zvinyorwa sechombo chekuchinja nyika. Uye chokwadi ndechekuti ichave iri yeanoshanda kupfuura ese. Nekudaro, chikamu cheiyo odyssey yekudzorera maronda epasi zvinogona zvakare kuve kubvumidza tsika dzese kuti dzitaure pachezvadzo pane kuvanyepera nemifungo isinganongedze dambudziko chairo.
Vanhu vazhinji, kunyanya vanoita zvematongerwo enyika, parizvino ndivo vari pamusoro pekusimudzira kodzero yekunyora mumitauro yemarudzi akasiyana siyana. vashoma kuitira kuchengetedza tsika yavo, nemienzaniso yakaita chirongwa chazvino chekudzidza muKurdish chakagamuchirwa neYunivhesiti yeKurdistan, muIran, kana kusimudzirwa kwaKichwa semutauro wechikoro chechipiri, akasiyana maQuechua akamutsidzirwa muEcuador nesangano reCONAIE.
Zvakadaro, ini handidi kupera pasina mubvunzo: zvingave zviri nani here kubvumidza kuvandudzwa kwemitauro yese pane kuda kuchinjanisa nemutauro unovatendera kuti vawedzere kupararira?
Uye chenjera, izwi rekuti "nyika" harina kuoneka mune chero mutsetse.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Kodzero yekunyora mumutauro wako